बिरामीको मृत्युपछि ओम अस्पतालमा तनावग्रस्त ! – न्यूज नेपाल
२०७४ पुस १, शनिबार
बिरामीको मृत्युपछि ओम अस्पतालमा तनावग्रस्त !
Posted on September 14, 2017 at September 14, 2017 by news NEPAL
काठमाडौंको चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा नाकको शल्यक्रिया गर्दा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ । आफन्तले अस्पतालमा नाराजुलुस लगाएका छन् ।
बुधबार दिउँसो बुटवलकी ४० वर्षिय कमला भट्टराईको मृत्यु भएको हो । उनी चार दिनअघि ९शनिबार अस्पताल० भर्ना भएकी थिइन्, उनी नाकको कुरकुरे हाड सोझ्याउन आएकी थिइन् । मृतकका आफन्तले भने डाक्टरको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् ।
‘जन्मजातै उनको नाक थोरै बांगो थियो, दुख्ने(घोच्ने केही हुन्थेन । बुझ्न जाँदा डाक्टरले सामान्य शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्यो,’ मृतकका श्रीमान बसन्त भट्टराईले भने । कमलाको उपचारमा अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा। राजेन्द्रप्रसाद गुरागाईं संलग्न थिए ।
शल्यक्रिया पश्चात बिरामीको नाकबाट निरन्तर रगत बगिरहेको, बारम्बार बान्ता भएको, पिसाब रोकिएको मृतकका आफन्तले बताए । ‘रगत नरोकिएपछि हामीलाई डेढ लाखको औषधि किन्न लगाए, डाक्टरले अत्याधिक औषधिकै कारण मृगौला फेल भयो पनि भने,’ मृतकका आफन्त विदुर दाहालले भने, शल्यक्रियापछिको उपचारपछि डाक्टरले कहिले संक्रमण कहिले हृदयघात भएको खबर दिइरहेको दाहालले सुनाए ।
शल्यक्रियापछि उनी आधा होशमा मात्रै थिइन्, केके बर्बराइरहेकी थिइन्, श्रीमान वसन्तले भने, ‘हामीलाई मृत्युको स्पष्ट कारण दिनुपर्छ, नत्र हामी डाक्टरलाई कानुनी कारबाही गर्छौं ।’
बिरामीको मृत्युबारे छानबिन गर्नुपर्ने, अस्पतालले आफ्नो लापरबाही स्विकारेर माफी माग्नुपर्ने मृतकका आफन्तहरुको माग छ । माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने उनीहरुले बताएका छन् । बिरामीको मृत्यु भएसंगै आफन्तहरुले अस्पताल घेरेका छन् । यता अस्पताल प्रशासनले भने कमलाको उपचारमा डाक्टरको लापरवाही अस्विकार गरेका छन् । ‘नाकको शल्यक्रिया सुन्दा सामान्य लागेतापनि यो संवेदनशिल अंग हो, यसको शल्यक्रियामा इन्फेक्सन बढी हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिरामीलाई बचाउन सकिँदैन,’ अस्पताल प्रसाशन प्रमुख बिनय प्याकुरेलले भने । मृतकका आफन्तलाई डाक्टरको लावरवाही जस्तो लागे छानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
अस्पतालका निर्देशक डा। जागेश्वर गौतमले भने, ‘सानो शल्यक्रियामा बिरामीको मृत्यु भयो, यस्तो घटना निकै कम हुन्छ, हामीलाई पनि दुख लागेको छ ।’ घटनाको छानबिन गरि कारबाही अघि बढाउने डा। गौतमले बताएका छन् ।
यो समाचार कान्तिपुरमा दैनिकबाट लिएको हो । स्रोत सामग्री हेर्न यहा क्लिक गर्नु होला ।
ओली किन अझै मधेस झरेनन्, कारण जान्नुहोस ।
Posted by news NEPAL - September 11, 2017 0
स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख दलका शीर्षनेताको ध्यान दुई नम्बर प्रदेशमा केन्द्रित भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मधेस…
गोप्यतामा चुक्यो नेपाल आईडल, रिजल्ट लिक भएपछि टिभी निर्देशकले माफी मागे (भिडियाे सहित)
काठमाडौँ । सुजता आउट हुने भन्ने कुरा कार्यक्रम छायंकन हुने बित्तिकै सामाजिक संजालमा केही व्यक्तिहरुले दावी गरेका थिए भने कति…
कांग्रेस उम्मेदवारले मतपत्र खाएपछि…
Posted by news NEPAL - October 8, 2017 0
२२ असोज, धनुषा । भरतपुर महानगरको मतगणनाका क्रममा १४ जेठको मध्यरातमा माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्याते । यसले माओवादी केन्द्रलाई बदनाम…
दूधमा दूध मिसाएर ग्राहकलाई खुलेयाम ठगी गर्नेलाइ के कारवाही गर्ने ? ( हेरौं यस्तो ठगी गर्नेको कान्तिपुरले पर्दाफास गरिदिएको भिडियो र समाचार)
Posted by news NEPAL - September 14, 2017 0
हरेकदिन ठिमी चोकबाट दधिकोट जाने पुल नजिक घर अगाडि एक बृद्ध बिहान पाँच बजेदेखि तीन क्रेट दुध राखेर बसिरहेका हुन्छन्…
मणिपाल अस्पताल कारबाहीमा
Posted by - May 3, 2017 0
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुस्ताङको कागवेनी दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचार गर्न नमान्ने मणिपाल अस्पताल, अस्पताल निर्देशक, डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय…
2017News In Nepal. Website by Himalayan Host